China FF08 Vagadziri uye Vanotengesa | Chenli
Mutyairi wedhipoz aifarira
▲ Ratchet kusunga pasi inonzi zvakare ratchet kumhanyisa 、 kumhanyisa bhandi 、 kutakura zvinhu izvo zvaishandiswa apo kutakura 、 kufamba 、 kurodha uye warehousing, kuti chengetedza zvinhu zvakagadzikana kana kugadzirisa zvinhu pavanenge vachifambisa nerori, chitima uye ngarava. Zviri nyore kuisa max simba raunoda kuribata neruoko ndi 500N, uye mushure mekunge ratchet rakakiiwa harizorasikirwe, kuchengeteka kuchinjika.
▲ "Chenli" ratchet tambo dzakanyatso kugadzirwa senge EN12195-2: 2000 yakajairika, mushure menguva yakareba kuvandudzika isu tatova nekubudirira kukuru kuburitsa kugona nehunyanzvi hwekugadzira mhando dzakasiyana-siyana uye hukuru hwekutakura zvinhu kutenha kuti zvigadzirwa zvedu zvive nemhando uye mutengo zvirinani uye zvirinani.
F01 RATCHET STRAPS Maximum Kuchengetedza Kushanda Mutoro weparamende.
Isu tinogona kugadzira kureba zvinoenderana nevatengi ndimi.
RATCHET STRAPS YEMamwe TYPES
▲ Inogona kushandisa nzira yakapfava yekutaurisa yakakuvara, yakanamatira, yakaremara mota kana jeep.Zinc yakarongedzwa hove yakarongedzerwa kubatanidza kumotokari zviri nyore.Yakareruka uye yakareruka kupfuura waya netambo kana ngetani uye inogona kuturikwa mumutumbi wemotokari. asi isina ngura, zvinyoro uye kuora.
▲ Maturu anorema anogona kubatana zvakasununguka, kubatsira mota dzakadzika mumadhaka, jecha kana chando.
▲ Zvikorekedzo zviviri parutivi rumwe nerumwe rwe tambo dzinomhara, chimiro ichi chinogona kubatanidza kune anchor point point nyore
▲ Yakareba urefu ndeye 8m, asi inogona kuchinjika se1m kusvika ku50m tembiricha iri -40 <℃ -100 ℃
▲ Kungoshandiswa chete iyo isina akakuvara ratchet tambo, iyo label inogona kuratidza zvakajeka kugona
▲ Usasunge banga bhandi
▲ Unogona kushandisa svheti yekudzivirira kuti mucheka ugadzire kure nepakakona kona, kudzivirira kupera simba kana kuwoneka.
▲ dzivirirwa kukanganisa, tambo tambo dzecheke
▲ Usaise chinhu patcheche tambo.it ichakonzera kukuvara
▲ Zvimiti zvinosungirirwa zvichienderana nezvinodiwa (zviredzo kana chetatu mhete) zvetchechetambo.
▲ Mumamiriro ezvinhu akajairwa, iwo mahwendefa epasi, kana iwe uchida mamwe mavara kana PVC kubatirira, ndapota cherekedza paunenge uchiraira
▲ Isu tine stainless simbi ratchet uye hove
▲ Chenli parizvino ane marudzi anopfuura mazana matatu emahara ezvigadzirwa, isu tinogona kugadzirisa chigadzirwa nefaira rako pepa remuenzaniso.
▲ Isa iyo Wheel Bonnet Tie Pasi pasi tireya yemotokari iri kufambiswa.Gadzirisa gokora rinopera kuti bonnet isimbe.
▲ Sakanidza iyo Hook End kusvika kune yakasimba anchor point.the chengetedzo cheni yehuku inofanira kuvharwa zvachose.
▲ Chengetedza iyo hovha kuRatchet End kune nzvimbo yakasimba yekubatanidza pane trailer iyo haizokuvadzwe nekunetseka.
▲ Purisa tambo kuburikidza neRatchet's chigubhu, wobva wavhura uye wovhara ratchet chibato kuti isimbise tambo pamusoro peya waya.Avoid pinching zvigunwe paunenge uchishanda ratchet kopano.Lock kubata pasi isati yashandiswa.
▲ Sungira pasi pechimbi chechikepe chinofanirwa kuve chakachengetedzeka.tarisa zvokunamatira zvikamu zvega makumi mairi nemakiromita panguva yekufambisa
4 Ratchet Strap NeFlat Hook
Ratchet Strap Matanho
Ratchet Strap Zvikamu
Ratchet Strap Rakatsanangurwa